Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. महाधिवेशनबाट अब काँग्रेसको नेतृत्व दोश्रो पुस्ताले गर्छन् : डा.शंशाक कोइराला – Janata Live
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाले पार्टीको आगामी नेतृत्व दोश्रो पुस्ताका नेताले गर्ने बताउनुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसंगको अन्तर्वार्तामा उहाँले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण हुने बेला आईसकेकाले अबको नेतृत्व आफु, बिमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह मध्ये एक जनाले लिने उद्घोष गर्नुभयो। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नेताद्वयलाई आफुले त्यस किसिमको भूमिकाका लागि आग्रह गर्ने बताउनुभयो। तेरो र मेरो भन्ने स्वभावका कारण सभापति देउवा पार्टीको सफल सभापति बन्न नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। नेतापुत्र त्रयको भेटघाट गुटउपगुटको अन्त्य गरि पार्टीलाई एकढिक्का बनाई सहमतिका साथ सभापतिको उम्मेदवार चयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यमा केन्द्रीत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तीन नेताको भेटघाट पार्टी भित्र नयाँ शक्ति र गुट निर्माणका लागि नभई एकताको लागि भएको एउटा सफल र प्रभावकारी प्रयासको रुपमा बुझ्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रस्तुत छ, आसन्न महाधिवेशन, क्रियाशिल सदस्यता तथा नयाँ नेतृत्वका सम्बन्धमा नेपाली काग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालासंग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश
प्रश्न : आसन्न महाधिवेशनको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ, व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा?
उत्तर : सबै भन्दा पहिला म पार्टीकै तयारीको कुरा गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म क्रियाशिल सदस्यताको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो अन्त्य अन्त्य सम्म आईपुगेको छ । मलाई लाग्छ यो महिनाको अन्त्य सम्म क्रियाशिल सदस्यताको अन्तिम टुंग्गो लाग्छ र एउटा खाका तयार हुन्छ त्यसपछि हामी अधिवेशन तर्फ जान्छौ । अहिले पार्टीको ध्यान नै क्रियाशिल तर्फ छ । आज पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो । क्रियाशिल सदस्यतामा के गर्ने भनेर कुरा भएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरु रामचन्द्र दाइ, शेखर डाक्टर साहेब, मिनेन्द्र रिजाल र अन्य सदस्यहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी क्रियाशिल सदस्यतालाई कसरी टुंगो लगाउने भनेर छलफल गर्दे थियौ । क्रियाशिल टुंगो नलगाईकन त हामी महाधिवेशनमा जान सक्क्तैनौ । त्यही नै अवस्था हो।
प्रश्न : क्रियाशिल सदस्यता तत्काल टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। यसले महाधिवेशनलाई पो प्रभाव पार्छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । कि त्यो आशंका गलत हो?
उत्तर : यो महिना भित्र क्रियाशिल सदस्यता टुंगा लगाउन सकिएन भने त आशंका त भईहाल्यो नि । यति जटिल नि क्रियाशिल सदस्यको बारेमा , हरेक जिल्लामा केही न केही छ । भन्छन् ४६ जिल्लामा भईसक्यो । त्यसमा पनि उजुरीहरु आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्यो । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिदैन कि समयमा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुदैन । प्रश्न चिन्ह चाहीँ छ । तर हाम्रो ध्यान त्यतैतिर गएको छ । र हामी क्रियाशिल सदस्यता छिटो टुंग्याउँ भनेर भरमग्दुर प्रयास गर्दैछौ।
प्रश्न : अहिले शिर्ष नेताका तीनजना पुत्र नेताहरुको संयुक्त भेटघाटलाई लिएर विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । अर्को गुट आउन खोज्यो अथवा शक्ति केन्द्रीत गर्न खोजियो भनेर पनि टिप्पणी भएका छन् । खासमा के थियो तपाईहरुको बैठकमा?
उत्तर : खासमा विमलेन्द्र निधीले नै इनिसियट गरेको हो । सबै भन्दा पहिले उहाँको बैबाहिक सम्बन्धको ३५ बर्ष भएको थियो । त्यो दिन प्रकाशमान सिं र मलाई बोलाउनुभयो । दोश्रो पटक यही मिटिङ गर्यौ र तेश्रो पल्ट प्रकाशमान जी को मा । हाम्रो भनाई के थियो भने, हामी पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्यो । सभापतिका लागि हामी ३ जना मध्ये कोही लड्छ भने ठिकै भयो । हामी मध्ये एकता हुनुपर्यो भन्ने कुरा आयो । यसमा धेरै कुराहरु उत्पन्न छन् । एउटा कि विमलेन्द्र निधीले शेर बहादुर जीलाई छाड्नुभयो भने भन्ने पनि संकेत देखिन्छ । दोश्रो कुरा हामी तिनै जना मध्ये एकजना लड्ने, तर त्यत्तिले पुग्दैन ।
रामचन्द्र दाइ, शेखर दाइ हुनुहुन्छ , प्रकाशमान र म त छदै छु । बिमलेन्द्र नीधि हुनुहुन्छ । मैले के भनेँ भने, हामी तीनजनाबाट ५ जना गरौ, ५ जनाबाट ७ जना गरौं, ताकि हामी एउटै सुत्रमा बाँधिन सकौ भन्ने धारणा हाम्रो थियो । तर यता आएर हाम्रो बीचमा केही छलफल भएको छैन ।
प्रश्न : मुलुकको समुल राजनीतिक अवस्था प्रतिकुल भएकाले नेतृत्व परिर्वतन नगरौ भन्ने आवाज पनि छ फेरि यता नेतृत्व परिवर्तनका लागि तपाईहरुको पहल पनि भईरहेको छ । ठयाक्कै समय आएको हो पुस्तान्तरण वा नेतृत्व परिवर्तनको?
उत्तर : समय त आएको छ । मेरो भनाई के हो भने । अधिवेशन आउँदै छ । हामीले अधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने हाम्रो दुर्रदशा भएको छ अहिलेको अवस्थामा । यसलाई दृष्टिगत गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी तीन जना नेता पुगेका छौ । कसरी हुन्छ परिर्वतन ? कसले गर्छ परिर्वतन ? त्यो प्रश्न त आजसम्म यथावत नै छ । तसर्थ, हामी ३ जना, ५ जना, ७ जना हुदै समुहलाई ठूलो पार्दै गयो भने एकै ठाउँमा उभिन सक्ने संभावना हुन्छ । त्यसले पार्टीलाई पनि मजबुत पार्छ । एकै ठाउँमा उभिँदा शक्ति पनि मिल्छ र एकजना मात्रै उम्मेदबार भयो भने हामी सजिलोसंग पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ध्येयले हामीले यो प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हो।
प्रश्न : तीनै जना नेतृत्वको आकांक्षी हुनुहुन्छ , कि त व्यवस्थापन गर्न पर्यो, कि त तिनै जना लड्नुपर्यो। व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? कुनै उपायहरु छन्?
उत्तर : यो त हामीबीचको वार्ताबाट नै समाधान हुनसक्छ। होइन भने त तीनै जनाले लड्नुपर्यो। वार्तामा बसेर कुनै टुंगोमा त पुराउनुपर्यो नि। हामीलाई लाग्छ कि नेतृत्व परिर्वतन हुनुपर्छ र हामी गम्भीर छौ भनेर त एकजना मात्रै उभिनु पर्यो नि । तीनै जना उभियौ भने त फेरि परिर्वतन हुदैन । त्यसैले हामी तीन जनाले यति चाही के भन्नुपर्यो भने हामी मध्ये एक जना उभियौ भने चाहीँ सजिलोसंग हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
उत्तर : शेर बहादुर जीको त धेरै उमेर पनि भईसक्यो । रामचन्द्र दाइ पाको मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँको राजनीति धेरै उतारचढाब भयो । तर मलाई लाग्छ उहाँले पनि अघि आएर अभिभावकको रुपमा लिनुपर्ने हो ठाउँ तर उहाँ पनि प्रत्यासी त हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले सम्झाउन सक्नुपर्यो कि तपाई अभिभावकको भूमिका खेलेर हामीलाई गाइड गर्नुहोस् । मलाई लाग्छ शेर बहादुर जीको पनि त्यही नै अवस्था देखिन्छ । धेरै बुढो भईसक्नुभयो । उहाँहरु कतिञ्जेल सम्म राजनीति गरिरहनुहुन्छ त ? अभिभावक बनेर हामीलाई गाइड गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरु आफै लड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ । यसरी चाहीँ अप्ठयारो हुन्छ।
प्रश्न : अहिले महामन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईको आफ्नो तयारी कस्तो छ ? आफ्नो उम्मेदवारीलाई कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ?
उत्तर : सबै भन्दा पहिले त मैले अधिराज्यभरीका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुसंग भेटघाट गरिरहेको छु । उनीहरुको राय, सल्लाहा, सुझाव एउटा त्यो भयो । दोश्रो कुरा नेताहरुबीचमा पनि संवाद हुनु जरुरी छ । हुन त कुरा भईरहेको छ नभएको होइन । शेखर दाइ, प्रकाशमानजी, रामचन्द्रजी र विमलेन्द्र जीसंग पनि कुरा त भईरहेको छ। हामी यही आधारमा अगाडि बढ्यो भने हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौ । म हुन्छु वा को हुन्छ । जो सुकै होस् एकजना उभिनुपर्छ अहिलेको दृष्टिकोण मेरो त्यही नै हो।
प्रश्न : आफ्नो कार्याकालमा शशांक कोइरालाले बोल्नुपर्ने बेलामा बोलेनन्, कार्यकाल सकिएको समितिले भटाभट नियुक्तिहरु गर्यो , त्यसमा दहे गरि बोलेनन् । नेतृत्वले आफ्नो हिसाबले पेलेर नियुक्ति दिने, मनोनय गर्ने कुराहरु भए, त्यो बेला पनि बोलेनन् । जुन बेला नबोल्नुपर्ने थियो धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा त्यसबेला बोले किन?
उत्तर : म भन्न चाहन्छु । एउटा त शेर बहादुर हाम्रो सभापति हाम्रो यत्रो हार भयो चुनावमा हरेकले उहाँलाई विरोध गरे । म मात्रै एउटा व्यक्ति थिएँ जसले उहाँलाई डिफेण्ड गरें । मैले के भनेँ भने उहाँको मात्रै गल्ति होइन । हामी पनि पदाधिकारीहरु हौ । हाम्रो पनि उत्तिकै गल्ती हो । मैले ढाल बने शेर बहादुर जीको । मैले शेर बहादुर जीलाई धेरै सेभ गरेको हो । र मैले नै विरोध गरिदिएको भए त पार्टी एक त छिन्नभिन्न छन् झन बिग्रेर जान सक्ने अवस्था देखेर मैले शेरबहादुर जीको ढाल बनेर उहाँलाई प्रोटेक्ट गरेको हुँ । नत्रभए त मैले पनि त बोल्न सक्थेँ नि । तपाईले भन्नुभयो किन बोलिनस् भनेर ? त्यही उत्तर म तपाईलाई दिदै छु । मैले बोलेको भए उहाँको विरोधमा बोल्नुपथ्र्यो । विरोधमा बोलेको भए अवस्था के हुन्थ्यो पार्टी भित्र ? त्यो हिसाबले मैले नबोलेको।
प्रश्न : तर यता पार्टी विधान, संविधानभन्दा बाहिर गएर बोलेको चाहीँ ? एक पटक होइन तीन तीन पटक धर्मको बारेमा बोल्दिनुभयो । जुन बेला समयनै थिएन।
उत्तर : हाम्रो संविधान बन्दै थियो । त्यो बेला मैले शुशिल दा लाई भनँे ‘ हेर्नुहोस् शुशिल दा, यो विपि कोइरालाले बनाएको पार्टी यो चारतारे झण्डामा एउटा तारा धर्म स्वतन्त्रताको प्रतिक हो । तपाईले धर्मनिरपेक्षता किन गर्देहुनुहुन्छ ? उहाँ हतारमा हुनुहुन्थ्यो । ५ ,७ दिन मात्रै बाँकी थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो प्रेसर छ मलाई के गर्छस् । पछि यो चेञ्ज गरौला ’ । त्यो भनिसकेपछि मैले बोल्ने कुरा आएन । किनभने संविधान नै दिनुभएन भने त शुशिल कोइराला पनि फेलियर भएर जानुहुन्छ । उहाँले अन्तमा संविधान दिन त सफल हुनुभयो नि । यो त नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो उपलब्धि हो नि । त्यो उपलब्धि पनि जान सक्ने संभावना देखेँ । त्यसैले मैले धेरै प्रेसर गरिनँ उहाँलाई।
प्रश्न : सभापतिको उम्मेदवारी दिदै गर्दा यहाँका मुद्दाहरु के के हुनेछन्?
उत्तर : सबै भन्दा पहिला पार्टीलाई एकजुट बनाउने कुरा छ । हाम्रो धरासायी हुने प्रथम काराण के हो भने टुक्रा टुक्रा भएको, गुटउपगुटहरुले ध्वस्त पारेको छ । सभापति आजको मितिमा पनि तेरो मान्छे , मेरो मान्छे भन्नुहुन्छ । उहाँ त सबैको सभापति हो नि । उहाँले आफ्नो धारणा परिर्वतन गरेको भए उहाँनै सफल सभापति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले आजको मितिसम्म ‘उसको मान्छे ,मेरो मान्छे’ भन्नुहुन्छ । म के चाहन्छु भने पार्टीलाई एक बनाऔ । पार्टीभित्र अहिलेको विधान राम्रो विधान होइन । विपि कोइरालाले सभापतिय पद्धतिमा जानुपर्छ अर्थात् सबैलाई चुनाव लड्न नदिएर केही सिटहरुचाही मनोनित हुनुपर्छ किनभने प्रेसिडेन्सीयल सिस्टममा प्रेसिडेन्ट त चुनावबाटै आउनुपर्यो तर ऊ आईसकेपछि उसले आफ्नो शक्तिलाई सन्तुलित राख्नका लागि मनोनित गर्ने ठाउँ हुनुपर्यो । महामन्त्री एकजना, उपसभापति जना….यस्तै गरेर उसको पार्टीप्रतिको पकड बलियो हुनुपर्यो । सबैले लडेर हुदैन । अधिवेशन भईसकेपछि महासमिति डाकेर यो विधानमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु।
प्रश्न : शासकिय स्वरुपलाई पनि सत्तारुढ दलले बहसमा ल्याउनुपर्छ भनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेको छ । यसमा तपाईको टिप्पणी के छ?
उत्तर : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विषय धेरै बर्षदेखि उठिरहेको छ । म चाहीँ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा नै विश्वास गर्छु । पहिले दलको नेता हुन्छ । हाउसमा आपफ्नो बहुमत ल्याउँछ । त्यही अनुसार हामी जानुपर्छ । प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, डाईरेक्ट चुनाव प्रेसिडेन्सको , त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुदैन।
प्रश्न : अन्त्यमा, अब महाधिवेशनकै प्रसंग, क्रियाशिल सदस्यको छिनोफानो, उम्मेदवारको लगायत टुंगो लागेर महाधिवेशनको अर्को कार्यतालिका कहिलेसम्म आउला?
उत्तर : सबै भन्दा पहिला त क्रियाशिल सदस्यतालाई यो महिनाको अन्तिमसम्म टुंग्याउनुपर्छ। त्यसमा हामी लागि रहेका पनि छौ । समिति बनाएर जिम्मा पनि लगाएका छौ। अरु पार्टीबाट आएका पनि समावेश हुनुपर्यो । बिजयगच्छदारको पार्टी, सुनिल थापा जीको पार्टीको क्रियाशिलहरु पनि समावेश हुनुपर्यो र त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक पनि समावेश हुनुपर्यो। मलाई लाग्छ यो शिघ्र नै सम्पन्न हुन्छ । त्यसमा फेरि विवाद भयो भने हाम्रो अधिवेशनलाई नै असर गर्छ। धन्यवाद ।